၁.၉.၂၀၁၂ စနေညပွဲစဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၁.၉.၂၀၁၂ စနေညပွဲစဉ်များ
Posted by မောင် ပေ on Sep 1, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 14 comments
ဒီနေ့ 1.9.2012 စနေနေ့ ညမှာ ကန်ကြမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ၊ ဘွန်ဒက်လီဂါ ၊ စီးရီးအေ နဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ်များအကြောင်း ပါ ခင်ဗျ
မနေ့ ညကတော့ ချဲဆီးပွဲကို ကျွန်တော် ခန့် မှန်းခဲ့ရာမှာ ၂မျိုးလုံးမှားခဲ့ပါတယ်
အခုပို့ စ်ကို တင်တဲ့အချိန်မှာ ရေးထားတဲ့ဈေးတွေဟာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဈေးတွေအပေါ်မှာ ကြည့်ပြီးရေးရတာပါ ၊ ညပိုင်းကြရင် ဈေးတွေဟာ ပြောင်းလဲမှု ရှိနေတာမို့ ၊ ကျွန်တော် မောင်ပေ့ စိတ်ကြိုက်များကိုတော့ ညပိုင်းကြမှ ကွန်မင့်ဖြင့် ထပ်ဖော်ပြပါဦးမယ်ခင်ဗျ
6.15 ဝက်ဟမ်း(၁၀) – ဖူဟမ်(၆)
8.30 ဆွမ်စီး(၂) – ဆန်းဒါးလန်း(၁၃)
8.30 စပါး(၁၄) – နော့ဝစ်(၁၈)
8.30 ဝက်ဘရွန်း(၄) – အဲဗာတန်(၃)
8.30 ဝီဂန်(၈) – စတုတ်(၁၁)
11.00 မန်စီးတီး(၅) – ကျူပီအာ(၁၇)
8.00 ဟော့ဖန်ဟိမ်း(၁၄) – ဖရန့် ဖတ်(၄)
8.00 ရှော်ကေး(၉) – အော့ဘတ်(၁၈)
8.00 လေဗာကူဆင်(၁၅) – ဖရိုင်းဘတ်(၁၁)
8.00 ဝါဒါဘရီမင်(၁၃) – ဟမ်းဘတ်(၁၇)
8.00 နုရင်ဘတ်(၇) – ဒေါ့မန်(၃)
11.00 ဒူဆယ်ဒေါ့(၂) – ဂလာဘတ်(၅)
10.30 တိုရီနို(၁၁) – ပီစကာရာ(၁၈)
1.15 ဘိုလော့နာ(၁၄) – အေစီမီလန်(၁၃)
8.30 ဆဲတာဗီဂို(၁၈) – အိုစာစူနာ(၉)
10.30 ဇာရာဂိုဇာ(၁၁) – မာလာဂါ(၈)
12.30 ဒီပို့ တီဗို(၅) – ဂီတာဖေး(၁၀)
2.30 မာယော့ကာ(၆) – ဆိုစီဒက်(၁၂)
ဝက်ဟမ်း(၁၀) – ဖူဟမ်(၆)
တန်းတက်ဝက်ဟမ်းအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်နှစ်ပွဲမှာ တစ်ပွဲရှုံး တစ်ပွဲနိုင် ရဂိုး ၁ ပေးဂိုး ၃ နဲ့ အဆင့်၁၀
ဝက်ဟမ်း ၁-၀ အက်စတွန်ဗီလာ (ပွဲစဉ်၁)
ဆွမ်စီး ၃-၀ ဝက်ဟမ်း (ပွဲစဉ်၂)
ဖူဟမ် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်နှစ်ပွဲမှာ တစ်ပွဲရှုံး တစ်ပွဲနိုင် ရဂိုး ၇ ပေးဂိုး ၃ နဲ့ အဆင့်၆
ဖူဟမ် ၅-၀ နော့ဝစ် (ပွဲစဉ်၁)
မန်ယူ ၃-၂ ဖူဟမ် (ပွဲစဉ်၂)
ဝက်ဟမ်းအသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Demel, Tomkins, Collins, McCartney
လယ် Noble, Diame
လယ် Vaz Te, Nolan, Jarvis
ရှေ့Carroll
ဖူဟမ် အသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကစားသမားများမှာ
နောက် Riether, Hughes, Hangeland, Briggs
လယ် Duff, Diarra, Sidwell, Kacaniklic
ရှေ့Rodallega, Petric
နှစ်သင်းစလုံးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူး ညတွေမှာ ကာလင်းဖလားပွဲကန်ခဲ့ကြပြီး
ဝက်ဟမ်း အသင်းဟာ ခရူးဝီအလက်ဇန်းဒါး အသင်းကို ၂-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဖူဟမ် အသင်းဟာ ရှက်ဖီးဝက်နက်စဒေး အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့ပါတယ်
ဝက်ဟမ်းနဲ့ ဖူဟမ် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
26.12.2010 ဖူဟမ် ၁-၃ ဝက်ဟမ်း
2.10.2010 ဝက်ဟမ်း ၁-၁ ဖူဟမ်
2.5.2010 ဖူဟမ် ၃-၂ ဝက်ဟမ်း
4.10.2009 ဝက်ဟမ်း ၂-၂ ဖူဟမ်
18.1.2009 ဝက်ဟမ်း ၃-၁ ဖူဟမ်
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ ဝက်ဟမ်း သရေဆိုရင် ၅၀ရှုံးအနေအထားကို ဖွင့်ထားပါတယ်
သည်ပွဲဟာ သရေကျဖို့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိနေပြီး ၊ အနိုင်ဆိုရင်တော့ အိမ်ရှင် ဝက်ဟမ်းပါပဲ
ဖူဟမ်ပရိသတ်များအတွက် သတင်းဆိုးတစ်ခုကတော့ ၊ ဖူဟမ်အသင်းရဲ့ အားထားရတဲ့ အမေရိကန်ကွင်းလယ် ကစားသမား ဒမ်ဆေး ဟာ စပါးကို ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ သဘောတူညီချက်ရသွားပြီမို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားပါပြီ ဆိုတာပါပဲ။
မန်ချက်စတာစီးတီး(၅) – ကျူပီအာ(၁၇)
မန်စီးတီး အသင်းဟာ ပွဲစဉ်၂ အပြီးမှာ ၁ နိုင် ၁ သရေ ရဂိုး ၅ ပေးဂိုး ၄ ၊ ရမှတ် ၄မှတ်
ကျူပီအာ အသင်းဟာ ပွဲစဉ်၂အပြီးမှာ ၀ နိုင် ၁ သရေ ၁ ရှုံး ရဂိုး ၁ ပေးဂိုး ၆ ၊ ရမှတ် ၁မှတ်
မန်စီးတီး အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲများမှာ
26.8.2012 လီဗာပူး ၂-၂ မန်စီးတီး
19.8.2012 မန်စီးတီး ၃-၂ ဆောက်သင်ပတန်
ကျူပီအာ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲများမှာ
28.8.2012 ကျူပီအာ ၃-၀ ဝါဆော (ကာလင်းဖလား)
25.8.2012 နော့ဝစ် ၁-၁ ကျူပီအာ
18.8.2012 ကျူပီအာ ၀-၅ ဆွမ်စီး
မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Zabaleta, Lescott, Kompany, Clichy
လယ် Nasri, Yaya Toure, Milner, Silva
ရှေ့Balotelli, Tevez
ကျူပီအာ အသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Fabio, Ferdinand, Onuoha, Traore
လယ် Taarabt, Diakite, Park, Hoilett
ရှေ့Zamora, Cisse
မန်စီးတီး နဲ့ ကျူပီအာ ထိပ်တိုက် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
13.5.2012 မန်စီးတီး ၃-၂ ကျူပီအာ
5.11.2011 ကျူပီအာ ၂-၃ မန်စီးတီး
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ မန်စီးတီး နှစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅၀ အနိုင် ကို သည်ဘက်မှာ မန်စီးတီး နှစ်ဂိုး ၁၀ အနိုင်ဖွင့်လာပါတယ် ။ ဒါဟာ မန်စီးတီး အနဲဆုံး ၂ဂိုးအပြတ်နဲ့ နိုင်မယ် ဆိုတဲ့အနေအထားကို ဦးတည်နေပါတယ်
သည်ဈေးအတိုင်းမပြောင်းခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ မန်စီးတီး ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အရမ်းကောင်းနေပေမယ့်
တစ်ဘက်က ကျူပီအာ အနေအထားကို ပြန်ကြည့်ရင် ၊ နိုင်ပွဲမရှိသေးတဲ့ ကျူပီအာ အသင်းဟာ မန်စီးတီး အသင်းကို လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးပေးမယ့်အသင်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ကျူပီအာ ရဲ့ သည်နှစ် ကစားသမားအင်အားဖြည့်တင်းထားမှု ကို ကြည့်ရင် သူ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ၊ ရာသီကုန်ရင် အဆင့်၁၀အတွင်းဝင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်
နောက်ပြီး မနှစ်က ပရီးမီးယားရာသီပိတ်ပွဲမှာ ကျူပီအာ နဲ့ မန်စီးတီး တွေ့ ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ကျူပီအာသာ တစ်ကယ်နိုင်လိုစိတ်ပြင်းခဲ့ရင် မန်စီးတီး ကို လယ်ဗယ်ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။
ညဈေးကတော့ ဘယ်လိုပြောင်းဦးမလဲ ဆိုတာမသိပေမယ့်
သည်ပွဲမှာတော့ “““ ကျူပီအာ ””” ကို အားပေးရင် အလွန်ဆုံး ရှုံး ခပ်ပါးပါး ပဲ ရှိမှာမို့ 
“““ ကျူပီအာ ””” ပါပဲ
ဒီပို့ တီဗို(၅) – ဂီတာဖေး(၁၀)
ဒီပို့ တီဗို အသင်းဟာ လာလီဂါပွဲစဉ်၂အပြီးမှာ ၁ နိုင် ၁ သရေ ၀ ရှုံး ရဂိုး ၅ ပေးဂိုး ၃ ၊ ရမှတ် ၄
ဂီတာဖေးအသင်းဟာ လာလီဂါပွဲစဉ်၂အပြီးမှာ ၁ နိုင် ၀ သရေ ၁ ရှုံး ရဂိုး ၃ ပေးဂိုး ၃ ၊ ရမှတ် ၃
ဒီပို့ တီဗို အသင်း သည်ပွဲမတိုင်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲများမှာ
26.8.2012 ဗလင်စီယာ ၃-၃ ဒီပို့ တီဗို
20.8.2012 ဒီပို့ တီဗို ၂-၀ အိုစာစူနာ
ဂီတာဖေး အသင်း သည်ပွဲမတိုင်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲများမှာ
26.8.2012 ဂီတာဖေး ၂-၁ ရီးရဲမက်ဒရစ်
18.8.2012 ဆီဗီလား ၂-၁ ဂီတာဖေး
ဒီပို့ တီဗို နဲ့ ဂီတာဖေး တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
5.2.2011 ဂီတာဖေး ၄-၁ ဒီပို့ တီဗို
20.9.2010 ဒီပို့ တီဗို ၂-၂ ဂီတာဖေး
28.3.2010 ဒီပို့ တီဗို ၁-၃ ဂီတာဖေး
7.9.2009 ဂီတာဖေး ၀-၂ ဒီပို့ တီဗို
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ ဒီပို့ တီဗို သရေ ၅၀ အရှုံးအနေအအထားကို သည်ဘက်မှာ ၈၀အရှုံးထိ ဖွင့်လာပါတယ် ။ နေ့ ခင်းဈေးပါ
တစ်ကယ်လို့ သည်ဈေးအတိုင်းပဲ ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ““ဒီပို့ တီဗို”” ကို အားပေးသင့်ပြီး
သရေကို ၅၀ ရှုံးထက် နဲပြီး ဖွင့်တဲ့အထိ ပြောင်းခဲ့ရင်တော့ ““ ဂီတာဖေး ”” အားပေးသင့်ပါတယ် ။
ကိုပေအောင်မှ ကျနော်တို့ လည်းအောင်ပါမည်
+++မန်စီးတီး – ကျူပီအာ(မန်စီတိး ၃ ဂိုးမှ သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကျူပီအာ ဘက်ကနေ ပျော်ပျော်ကြီး အရှုံးခံ ပါတယ်)
+++ စပါး – နော့ဝစ်ခ်ျ … (ရှုံးပွဲ ဆက်နေပေမယ့် စပါးရဲ့ တိုက်စစ်ကို.. မနှစ်ကလောက်မကောင်းတော့တဲ့ နော်ဝှစ်ခ်ျအတွက် ၂-၀ )
+++ လေဗာကူဆင် – ဖရိုင်းဘတ်…(1Dလောက်ပေးထားတော့ ၁မှတ်မှမရသေးတဲ့ လေဗာကူဆင်ကို မရှုံးနိုင်တဲ့ ၁-၀ ပေး၇အောင်+++ နုရင်ဘတ် – ဒေါ့မွန်… (ဈေးက 1D လောက်ဆိုတော့ နုရင်ဘတ် ဘယ်လောက်ခံကန်နိုင်မလဲ… ဒေါ့မွန် ပါပဲ။
+++ ရှော်ကေး – အော့ဘတ် (ဈေးကတော့ ၂လူံစား ပြင်းပေမယ့် အော့ဘက် ကို ၂ ဂိုးသွင်းဖို့တော့ မခက်နိုင်ပါဘူး)
+++ ဘိုလော့နာ– အစီမီလန်(ရှက်ဖွယ်လိလိ ရှုံ့းထားတဲ့ မီလန်၁ လုံးသွင်းရင်တောင်ကျနော်တို့အတွက် ပျှော်စရာဈေးဖွင့်ထားတယ်)
+++++++++++++++ကျနော် ကြိုက်မိသမျှ ဘ၀ ဘ၀ လေးတွေပါဗျားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး+++++++++++
စိတ်ဝင်စားတယ် ကျူပီအာ …..
မန်စီးတီး ကွင်းဆိုတော့ ဟွင်းဟွင်းးးးးးးးး
လောင်းဂျေးးးးးး(ကြေး) ဂရုစိုက်သင့် …. အဟင့်
*ကိုဆာမိ ရေ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေဗျာ
*ကိုလူဆိုး ရေ ၊ ကျွန်တော့်လမ်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ “ ဝက်ဟမ်း ” အောင်နေပြီ ၊ ပထမပိုင်း ၄၁မိနစ်မှာတင် ၃-၀ တဲ့ ၊ ဂိုးပေါင်းအနဲ ရှည်ပြီး နဲနဲပုတ်လိုက်တာ မွှားပေါ့ ၊ အစ်ကို့ ပွဲတွေကို ခဏနေကြမှ ကွန်မင့်တစ်ခုနဲ့ ရေးဦးမယ်ဗျို့ 
*မေဂျူလိုင် လေးရ ကျူပီအာ ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာမိတယ် ။ နိုင်ပွဲပျောက်နေတဲ့ အာဆင်နယ် တို့ လီဗာပူး တို့ နောက်ကို လိုက်တာထက် ၊ နိုင်ပွဲမရှိသေးတဲ့ ကျူပီအာ နောက်ကို လိုက်တာမျိုးက ကြေး အောင်တတ်ပါတယ်
ဖတ်ရှုသွားတဲ့ စာဖတ်သူများအားလုံးနဲ့ ကွန်မင့်ချီးမြင့်ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စပါး ၁ ၇ှုံး
မန်စီးတိး ၂ သရေ
လေဗာကူဆင် ၁..၁၀ ပြားစား
ေ၇ှာ်ကေး ၁ ရှုံ့း
ဒေါမွန် ၁ ..၂၀ စား
အေစီ သရေ..ရှုံး….တဲံ့ ..
ချိန်နေတုန်း။ ကြေး နဲနဲ များနေလို့ ။ အေစီတော့ လုပ်သင်ပတယ် ထင်တယ်။
ထပ်စိတ်ဝင်စားတာက ၀ါဒါဘရီမင်..၁…၇၀ စား
မန်စီးတီး ၂ဂိုးသရေ ကို မန်စီးတီး ၂ဂိုး =၀၅ ပေးလာတာ ဟာ မန်စီးတီးဘက်ကိုလာခဲ့လို့ လက်ယက်ခေါ်နေတာပါ
စပါး တစ်ဂိုးနဲ့ ပဲ နိုင်ရင် အပြည့်ရှုံးအနေအထားကို စပါး တစ်ဂိုးနဲ့ နိုင်ရင် ၈၀အရှုံးပဲ ဖွင့်လာလို့ 
စပါးနေရမှာ ကြောက်ပါတယ် ။
ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါ အတွက် မောင်ပေ့ စိတ်ကြိုက်များမှာ
ဝါဒါဘရီမင်(၁၃) – ဟမ်းဘတ်(၁၇)
ဝါဒါဘရီမင် တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် အပြည့်နိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း တစ်ဂိုးသွင်းမှ ၈၀အနိုင်သာပေးလာသဖြင့် ၊
“““ ဝါဒါဘရီမင် ”””
ရှော့ကေး(၉) – အော့ဘတ်(၁၈)
ရှော့ကေး တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် အပြည့်ရှုံးမည်ဖြစ်သော်လည်း ရှော့ကေး တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် ၉၀အရှုံးသာ ဖွင့်လာသဖြင့်
“““ အော့ဘတ် ”””
လေဗာကူဆင် (၁၅) – ဖရိုင်းဘတ် (၁၁)
လေဗာကူဆင် တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် သရေ ဖြစ်သော်လည်း လေဗာကူဆင် တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် ၂၀ အနိုင်ဖွင့်လာသဖြင့်
“““ ဖရိုင်းဘတ် ”””
နုရင်ဘတ် (၇) – ဒေါ့မန်(၃)
ဒေါ့မန် တစ်ဂိုးသွင်းလျှင် ၅၀ အနိုင် ကို ၂၅အနိုင်ပဲ ပေးလာသဖြင့်
“““ ဒေါ့မန် ”””
စပါးတော့ ဒီနေ့ ကျနော်လဲ ရှောင်ထားတယ်..။ ဒီနေ့တော့ အေစီ၊ ဒေါ့မွန်၊ ၀ါဒါ၊ ကျူပီအာ ..အကြိုက်ဆုံး… ကြေးတန်သလို့ နိုင်နိုင်ချေ ရာခိုင်းနှုန်း တော်တော်မြင့်တယ်။ ရှုံးလဲ … ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လေးစားလို့ ..အဟဲ နှညောဘူး..။
ပြီးတော့ ရှော်ကေး။ လေဗာကူဆင်၊ ….
ဘိုလော့နာ(၁၄) – အေစီမီလန်(၁၃)
နှစ်သင်းစလုံး စီးရီးအေ အဖွင့်တွင် ရှုံးခဲ့ကြသည်။
ဘိုလော့နာ က ချီယေဗို အသင်းအိမ်ကွင်းတွင် ၂-၀ ဖြင့် ရှုံးခဲ့ပြီး
အေစီမီလန် ကတော့ ကိုယ့်အိမ်ကွင်းမှာကို တန်းတက် ဆမ်ဒိုးရီးယားအသင်းအား ၁-၀ ဖြင့် ရှုံးခဲ့သည်
ဘိုလော့နာ အသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Carvalho, Antonsson, Cherubin
လယ် Motta, Pulzetti, Taider, Guarente, Morleo
ရှေ့Diamanti
ရှေ့Acquafresca
အေစီမီလန် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် De Sciglio, Bonera, Yepes, Antonini
လယ် Flamini, Montolivo, Nocerino
ရှေ့ Bojan, Pazzini
ဘိုလော့နာ နဲ့ အေစီ တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
22.4.2012 အေစီ ၁-၁ ဘိုလော့နာ
11.12.2011 ဘိုလော့နာ ၂-၂ အေစီ
1.5.2011 အေစီ ၁-၀ ဘိုလော့နာ
အဖွင့်ပွဲမှာ ၂သင်းစလုံး ရှုံးနိမ့်ထားကြလို့ ဒီပွဲမှာ အနိုင်ရအောင် ပိုအားစိုက်ကစားလာမှာ အသေချာပါပဲ
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ အေစီ သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံးကို အေစီ သရေ ၉၅ရှုံး ဖွင့်လာပါတယ်
အေစီမီလန်နည်းပြဟာ သူရို့ အသင်း အားနည်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ဝန်ခံထားပါတယ်
ဒီပွဲမှာ မောင်ပေ စဉ်းစားမိတာလေးက ၊ အေစီမီလန်သာ တစ်ကယ်အနိုင်ကန်မှာဆိုရင် အေစီဈေးဟာ တစ်ဂိုး သွင်းရင် ၈၀/၉၀ အနိုင် လောက်ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ် ။ အခုဖွင့်လာတဲ့ဈေးဟာ နုလွန်းနေပါတယ်
““ ဘိုလော့နာ ”” ကိုပဲ အားပေးတာ ကောင်းမှာပါလေ
လေဗာကူဆင် ၁-၀ တဲ့ ကိုပေ…။ အေစီက ၁..၉၀ တဲ့ ကိုပေ… ကျနော်တော့ လုပ်ထားတယ်။ ယုံကြည့်တာပေါ့နော… ရာသီအစမှာ ရုန်းကြမလား။ ရှုံးထားတော့ ဖိအားနဲ့ ဆိုတော့ ကန်ကြမလားဆိုပြီး….
အပြန်အလှန် အစ်ကို့ အကြိုက်လေးတွေ ကို ပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ
အဟဲ..ကိုပေ ၀က်ဟမ်းနိုင်သွားလို့ ကျူပ်က မလောင်းပေမယ့် အချောင် ၀မ်းသာနေတာ..။ ကိုပေ အောင်ပါစေဗျာ…။
ဒါနဲ့ မနက်ဖြန် ပို့စ် စောစောတင်လေကိုပေရ..။